Weerar dad badan lagu dilay oo Mareykanka ka dhacay – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWeerar dad badan lagu dilay oo Mareykanka ka dhacay
October 28, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Weerar dad badan lagu dilay oo Mareykanka ka dhacay
Ciidamada Booliska Magaalada Pittsburgh ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in dilay 11 qof kaddib markii qof hubaysan uu rasaas ku furay macbad Yuhuudda ay ku cibaadeysato oo halkaasi ku yaalla.
Booliska waxa ay sheegeen Ninka weerarkani geystay ee looga shakisanyahay in lagu magacaabo Robert Bowers oo 46 sano jir ah.
Ninkaan ayaa waxaa dhaawacay Ciidanka Booliska waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal halkaasi ku yaalla, sida ay booliska xaqiijiyeen.
Boqolaal dad ah oo ka kala yimid magaalada Pittsburgh iyo magaalooyinka u dhowba ayaa isku yimid si ay ugu duceeyaan dadkii ku dhintay weraarkaasi.
Sophia Levin, oo ka soo jeeda Pttispurgh ayaa sheegtay in dadka ay aad uga caroodeen dhacdadani balse ay hadda u muuqato inay doonayaan in arrintan loo wajaho si wada jir ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaan oo uu ku tilmaamay mid si naxariis darro ah oo aan kala sooc lahayn loo fuliyay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu booqan doono magaladaasi ka dib markii uu dhacay weerarkan ay ku dhinteen 11-ka qof.
DHAGEYSO: Madaxweynaha kilinka Soomaalida oo ka warbixiyay arimo badan oo caqabad kunoqday iyo arimihii ugu danbeeyay
711,764 total views, 8,981 views today
711,764 total views, 8,981 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
711,639 total views, 8,980 views today
711,639 total views, 8,980 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
711,669 total views, 8,980 views today
711,669 total views, 8,980 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
711,733 total views, 8,982 views today
711,733 total views, 8,982 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
711,786 total views, 8,981 views today
711,786 total views, 8,981 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]